Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Voan'ny Etazonia, Israel, Palestine! Ahoana ny fomba hivelomana? Vehivavy 3 no mizara ny tantarany
Miaraka izao tontolo izao. Coronavirus tsy mahalala sisin-tany, tsy mamindra fo ary te hamono. Mandritra izany fotoana izany, ny COVID-19 dia mety ho vintana tsara indrindra ho antsika amin'ny fandriam-pahalemana manerantany ary miaraka. Ity Ady lehibe iray ity dia tsy manana fahavalo iray tsy hita maso fotsiny - ary ny olombelona dia eo amin'ny lafiny iray amin'ny ady.
Hatramin'ny alatsinainy tolakandro dia nahatratra 1.925,179 ny trangana virus coronavirus no voamarina manerantany. Olona 119,701 19 farafahakeliny no maty vokatry ny COVID-447,821, XNUMX sitrana.
Ny aretina ateraky ny pathogen - ary an'aliny maro no ao anatin'ny toe-javatra sarotra. Ny areti-mandringana dia niteraka fahapotehana ara-toekarena marobe, ny fiatraikany izay vao manomboka manomboka takatra tanteraka raha vao ajanona ilay valanaretina.
Mandra-pahatongan'izany, ny antsasaky ny mponina manerantany dia mijanona eo ambanin'ny ambaratonga fanidiana isan-karazany, miaraka amin'ny maro tsy mahazo miala amin'ny tranony. Eny tokoa, ny fijaliana dia mihoatra lavitra an'ireo izay voan'ny aretina ihany. Vitsy, raha misy, izay notsimbinin'ny fahasahiranana tanteraka, zava-misy izay nitondra fifantohana mazava tsy ny fahalementsika fa indrindra, ny maha-olombelona antsika iraisana.
Ity dia nasehon'ireo izay tafarina tamin'ny COVID-19, ny telo amin'izy ireo dia nizara ny tantarany tamin'ny The Media Line. Ireto misy tantara telo tsy mampino avy amin'ny vehivavy 3 sy avy amin'ny firenena 3: USA, Israel, ary Palestine.
Courtney Mizel, Los Angeles, Etazonia
Teraka sy lehibe tao Denver, Colorado aho, fa monina any Los Angeles ankehitriny. Miasa amin'ny maha-stratejika sy mpanolotsaina ara-dalàna ahy aho, mifantoka amin'ny habaka tsy mitady vola. Izaho koa dia miasa ao amin'ny filankevi-pitantanana ho an'ny orinasam-panjakana ary koa fikambanana tsy mitady tombontsoa maro eo an-toerana sy nasionaly.
Courtney Mizel. (Fanajana)
Nahoana no nieritreritra ianao fa voan'ny virus coronavirus?
Niatrika fanahiana be momba ny fanovana rehetra natao hiadiana amin'ny fiparitahan'ny COVID-19 aho, anisan'izany ny fanafoanana ny sekoly, ny filaminan'ny trano ary izay rehetra tonga tamin'izany. Nandritra ny roa andro dia natahotra aho - rehefa nanjary sarotra kokoa ny fofonaiko - ary niahiahy aho hoe iza no azoko antsoina hikarakara ny zanako raha tsy maintsy mankany amin'ny hopitaly aho. Rehefa mijery ny zava-mitranga amin'ireo olona manerana an'izao tontolo izao izay marary mafy aho, dia feno fankasitrahana noho ny fahalemeko. Mihevitra ny tenako ho iray amin'ireo tsara vintana aho.
Tsy azoko antoka na tena coronavirus izy na tsia satria tao amin'ny kaonferansa [American Israel Public Public Committee] tany [Washington, DC, ary avy eo nankany Colorado. Koa satria nandehandeha aho ary satria tsy fahita firy amiko ny tazo, dia nanolo-kevitra ny dokoterako fa hanao fitiliana any Cedars-Sinai [Ivon-toeram-pitsaboana], izay nataoko tamin'ny 14 martsa. Tany am-piandohan'ny zava-drehetra, mbola conservative momba ny fitantanana ny fitsapana coronavirus noho ny tsy fahampiana efa nisy.
Naharitra enina andro - hatramin'ny 20 martsa - vao nahazo ny valiko. Raha tsy nandray fepetra fisorohana aho dia tsy fantatro hoe firy ny olona [azoko] voan'ny virus.
Inona ny fihetsikao voalohany taorian'ny fitsapana tsara?
Taitra aho. Ny tazo ihany dia 100.6 degre Fahrenheit [38.1 degre Celsius] ary naharitra roa ka hatramin'ny telo andro.
Raha ny fantatro dia nisy olona nilaza fa voan'ny demonia avo kokoa. Nihidy tery ny tratrako ary nahatsiaro ho reraka tokoa. Tamin'ny fotoana nahazoako ny valiko dia efa [nihena] ny ankamaroan'ny soritr'aretiko.
Nanomboka nanao fanatanjahan-tena aho ary niharatsy kely nefa tsy tonga hatrany amin'ny hopitaly.
Mihevitra ve ny manam-pahefana amerikana fa manao fitsapana ampy?
Ny loza lehibe indrindra dia ny olona iray miaraka amin'ireo soritr'aretiko izay voan'ny sohika aza mety tsy [mahafeno ny mason-tsivana] hosedraina. Amin'ny ankapobeny dia mila mihoatra ny 65 taona ianao, manana toe-javatra iainana [mafy kokoa], na fantatrao fa niharihary mivantana ianao. ...
Raha tsy misy fanandramana misimisy kokoa na fampiharana henjana ny torolàlana momba ny quarantine toa an'i Israel, tsy hitako ny fomba hampijanonantsika [any Etazonia] ny fihanaky ny viriosy. Ilay fitomboana mitombo mampatahotra izay mampatahotra tokoa.
Nanao ahoana ny fihetsiky ny zanakao?
Ny zanako, Zoe, 14, sy Isabella, 13 taona, dia niahiahy. “Mahazo milaza amin'ny namantsika ve isika,” hoy izy ireo nanontany. … Ny virus coronavirus dia tsy zavatra tokony hahamenatra antsika. … Nijanona tao amin'ny efitrano fatoriana sy ny biraoko izay tao an-trano aho matetika. Rehefa teny amin'ny manodidina ny ankizy sy ny faritra mahazatra aho dia nisaron-tava ary nanasa tanana hatrany.
Courtney Mizel (R), miaraka amin'ny zaza Zoe sy Isabella. (Courtesy)
Inona no torohevitrao ho an'ny hafa izay mandalo izany?
Ny zavatra tsara indrindra azon'ny tsirairay atao dia ny fikarakarana ny hery fiarovan'ny vatana sy ny fianakaviany. Mila miresaka amin'ny dokoterany ny olona alohan'ny handehanana any amin'ny efitrano fitsaboana na hanandrana hitsapana.
Tsy misy sarontava ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana. Mazava loatra ny fampahalalana. Any Israel, ny torolàlana dia avy any ambony. Eto, ny filoha, ny governora ary ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina dia samy manana ny fomba fiteniny. Mahatsiravina izany ary miteraka fisavoritahana ho an'ny rehetra.
Betsaka amintsika no voan'ny virus ary maro no tsy mahalala fa voan'izy io. Ny [toe-javatra] dia miteraka fanangonana adala ary matahotra mafy ny olona ary tsy mahazo torolàlana mazava. Ka noho izany dia mailo izy ireo na [mihidy] tanteraka ary tsy miraharaha [ny krizy].
Azonao atao ve ny mampahafantatra vetivety ny tenanao?
[Nifindra tany Israel] kely aho telo taona lasa izay. Avy any New Jersey aho ary mampianatra literatiora anglisy ao amin'ny Oniversite Bar-Ilan.
Carra Glatt. (Fanajana)
Nilaza ianao fa efa tany Etazonia ary niverina tany Isiraely. Tsy maintsy nitokana irery nandritra ny 14 andro ve ianao?
Zavatra iray mahaliana amin'izany: niverina teo alohany aho - toy ny 12 ora teo aloha - ny governemanta [nampihatra ny politika] ary tsy naverimberina. Soa ihany fa nijanona tao amin'ny quarantine an-trano aho mba tsy ho voaro. Saingy ara-teknika dia tsy nila nanao izany aho. Tsy dia nisy dikany izany. ...
Aiza no hitanao fa voan'ny virus ianao?
Tany New Jersey aho tany namangy ny fianakaviako. Miahiahy aho fa nahazo [coronavirus] tamin'ny raiko saingy tsy nosedraina mihitsy izy ka tsy tena fantatray. Ny antony iheverako izany dia satria nanana namana akaiky izy izay niara-nivoaka nisakafo atoandro niaraka taminy, roa andro taty aoriana, dia naiditra hopitaly.
Talohan'ny nialako tany Israel, ny raiko dia voan'ny soritr'aretina gripa. Nankany amin'ny dokotera izy ary, fa tsy nanome azy fitsapana coronavirus, dia nomeny fitsapana gripa aloha izy ireo, izay tsara. Nanao taratra X-tratra izy ary nilaza ny dokotera, “Oh, mazava izany, ka tsy hizaha toetra anao [momba ilay virus] izahay.” Raha vantany vao voamarina aho, dia azo inoana fa nanana izany izy. Niantso [ny dokotera] indray izy tamin'izay ary nilazana hoe: “Tsy manavy ianao izao ka tsy hitsapana anao izahay.”
Tamin'ny faran'ny diako dia tokony handeha hanao fihaonambe iraisam-pirenena tany New Orleans aho ary avy eo [nanapa-kevitra ny [governemanta israeliana] fa izay rehetra manao izany dia tokony hiditra amin'ny quarantine rehefa hiverina any amin'ny firenena. … Nanomboka tamin'izay dia tsy nandao ny tranon'ny ray aman-dreniko aho. Toy ny hoe: “Hijanona be eto fotsiny aho ary tsy hampiharihary tena amin'ny olona.” Ny toerana tokana mety nahavoa ahy dia ny sidina [niverina tany Israel], saingy mbola tsy naheno tranga misy ny [mpandeha] narary aho.
Azonao faritana ve ireo dingana nataonao raha vao nanomboka nahatsapa soritr'aretina ianao?
Rehefa miverina any Isiraely avy any Etazonia aho, dia matetika aho no manana jet lag ratsy. Fa mba hialana sasatra fotsiny, dia naka ny mari-pana isan'andro aho. Niverina aho tamin'ny [Alatsinainy 9 martsa] ary mieritreritra aho fa ny Alakamisy na Zoma teo dia nanavy aho ary nahatsiaro reraka. Noho izany, tokony ho herinandro taty aoriana dia niantso an'i MADA aho [serivisy vonjy maika Magen David Adom] satria angatahin'izy ireo ianao hifandray amin'izy ireo raha tsy voan'ny tazo mihoatra ny 38 degre Celsius ianao. Io no hany andro nahatsapako ho narary.
Azonao atao ve ny manazava ny fizotry ny fizahan-toetra?
Rehefa niantso an'i MADA aho dia, "Tsindrio 1 ho an'ny safidy mahazatra ary kitiho ny 2 ho an'ny coronavirus." Heveriko fa niova ny fizotrany ary nandinika olona bebe kokoa izy ireo. Saingy tamin'ny fotoana nilazako azy ireo hoe inona ny mari-pana ko. Nilaza ihany koa aho fa tsy nanana soritr'aretina [lehibe] hafa afa-tsy ny reraka. Tsy mikohaka aho na inona na inona. Nasian'izy ireo lisitra aho ary tonga ny ampitso maraina. Misy olona tonga miaraka amin'ny fitaovam-piarovana feno ary manome anao fehin-tenda sy ny orona. Tena tsy mahazo aina. Nahazo ny valiko aho roa andro taty aoriana ary tena taitra aho satria tamin'izay dia salama tsara aho.
Moa ve nanome anao fankasitrahana tsara kokoa ny maha-mafy ny olana - fa ny olona somary simétrika dia mety handeha amin'ny orinasany nefa tsy fantany hoe voan'io aretina io izy?
Eny. Indrindra satria raha tany Etazonia aho dia tsy nisy fomba nosedraina ahy. … Fantatro ny olona maromaro izay mieritreritra fa nanana izany. Ny olona tsy nosedraina dia nilaza tamin'ny dokotera azy ireo hoe: “Ie, azoko antoka fa voan'ny coronavirus ianao.” Ny vatako dia somary niala tamin'ny jetlag dia nahazo bibikely kely ianao ary avy eo izay. Ka noho izany dia heveriko fa tsy maintsy misy olona an-taonina mandehandeha izay tsy manana ny famantarana ny voany. Raha ny zavatra azoko dia olana iray hafa dia ny areti-mifindra indrindra ny olona ny andro alohan'ny manomboka marary.
Nolazainao fa miaina miaraka amin'ny fofombadinao ianao. Sarotra taminareo roa ve?
Misy ny idealy ary avy eo misy ny ataonao amin'ny fampiharana. Voalohany indrindra dia nosedraina izy ary noheveriko fa voan'ny virus izy satria, ny mampihomehy dia marary kohaka ratsy izy. Saingy ratsy toetra izy. Nijanona tao amin'ny efitrano misaraka tokoa izahay, saingy satria iray monja ny trano fidiovanay, dia tsy afaka nitokantokana aho. Namafa ny habakabaka sy ny zavatra rehetra aho. Nahatsiaro ho salama tsara aho ary miandry fotsiny ny fitsapana manaraka. Nihataka lavitra ny trano izahay tamin'ny ankapobeny, ary nijanona 2 metatra.
Carra Glatt sy ny fofombadiny. (Courtesy)
Nosedraina indray ve ianao?
Any amin'ny firenena maro izay tsy ampy test-kit, dia tsy manandrana anao mihitsy izy ireo. Nambaran'izy ireo fotsiny fa raha tazo mandritra ny telo andro ianao ary efa mihoatra ny iray na roa herinandro hatramin'ny nanombohan'ny soritr'aretina dia afaka mivoaka ianao. Tany Israel, tsy maintsy nanana valim-panadinana roa ratsy aho alohan'ny nanadio ahy.
Niantso ahy indroa isan'andro ny orinasako fiantohana ara-pahasalamana hijerena, ary tamin'ny fotoana iray tsy tsy tazo aho dia nisy nilaza tamiko hoe: "Ataoko anaty lisitra miaraka amin'ny MADA ianao mba hitsapana indray." Rehefa afaka andro maromaro dia niantso an'i MADA aho, saingy nilaza izy ireo fa tsy tao anaty lisitra iray aho. Niverina nandroso aho ary nieritreritra fa misy ny tsy fahazoan-kevitra. Roa herinandro katroka taorian'ny nanontaniako tany am-boalohany dia niantso i MADA fa hosedraina ny ampitso. Ka mahasosotra izany. Saingy, tamin'ny farany, dia nosedraina indray aho ary salama tsara izao.
Manana hafatra fanantenana na aingam-panahy ho an'ny hafa izay mandalo fitsapana mitovy amin'izany ve ianao?
Mieritreritra aho fa hampahatsiahy fotsiny ny tenanao fa mazava ho azy fa tokony handray an-tsaina izany tokoa isika. Saingy miaraka amin'izay ho tsapanao fa ho an'ny ankamaroan'ny olona [izay voan'ny virus], dia ho malemy ny vokany. Midika izany fa tsy ity no narary indrindra hatramin'izay. Manana zavatra tsy mampatahotra betsaka aho ary nahatsapa ho ratsy kokoa. Heveriko fa ny ampahany mafy indrindra tamiko dia ny tsy fahalalana tsy miova ny fotoana hamaranana ny fitsapana. Saingy nanao sy [sitrapo ho an'ny ankamaroan'ny olona] izany. Tsy fantatrao ny fotoana marina, fa rehefa afaka izany, dia afaka miteny ianao hoe: “Ity no andro hilalaovako.”
Mariana Al-Arja, Betlehema, West Bank, Palestine
Azonao atao ve ny mampahafantatra ny tenanao?
Mariana no anarako ary Palestiniana monina any Betlehema aho. Izaho dia miasa amin'ny maha tale jeneralin'ny Angel Hotel, izay orinasam-pianakaviana.
Angel Hotel, Bethelem, West Bank. (Fanajana)
Ary oviana ianao no tonga saina fa voan'ny COVID-19 ianao?
Ny zava-nitranga dia nanana vondrona avy tany Gresy izahay ary manahy aho fa satria mbola avy amin'ny seranam-piaramanidina ireo mpizahatany dia mety hahita tranga isika. Indray andro dia nahazo antso an-telefaona iray tamina masoivoho misahana ny fizahan-tany [azoko ny mpanjifa] izay nilaza fa ny olona sasany izay nijanona tao amin'ny trano fandraisam-bahiny ny 23 ka hatramin'ny 27 Febroary dia voamarina fa voan'ny coronavirus taorian'ny nody.
Tsy fantatro raha nisy voa taminay. Ka ny zavatra voalohany nataoko dia ny [fanaovana antso] ary tonga tany amin'ny biraon'ny minisitry ny fahasalamana [tao Ramallah]. Nilaza tamiko izy ireo fa tsy maintsy entiko miverina any amin'ny hotely ny mpiasako rehetra mba hanandramana azy ireo.
Ka, hitanao fa voan'ny coronavirus ianao talohan'ny nahatsapanao soritr'aretina?
Eny, marina. Ary raha tsy ny masoivohon'ny dia, dia tsy ho fantatro izany. Tsy nanana soritr'aretina aho saingy narary ny mpiasako roa ary tsy afaka niasa teo anelanelan'ny 27 febroary sy 1 martsa. Talohan'ny nahalalanay na inona na inona [momba ilay vondrona avy any Gresy].
Karakaraina ao amin'ny hotely ve ianao izao?
Tsia. Tsy foana ny trano fandraisam-bahiny ankehitriny, saingy manodidina ny 40 izahay no efa natokana ho ao anatiny. Nisy olona avy tany Etazonia ary koa mpiasa maherin'ny roampolo. Nijanona teto izahay nanomboka ny 5 martsa ary ny Amerikanina dia nanao fizahana ihany ny 20 martsa. Saingy nijanona herinandro iray hafa niaraka tamin'ny iray tamin'ireo mpiasako aho satria niverina foana ny fitsapana azy.
Mariana Al-Arja, ao amin'ny biraony mandritra ny quarantine. (Courtesy)
Nosedraina daholo ny olona alohan'ny avela handeha?
Eny, tsy maintsy nanana valim-panadinana ratsy telo izahay vao afaka nandao ny hotely. … Taorian'izay dia niverina tany an-tranoko aho ary nijanona tao 14 andro hafa ary avy eo dia tsy maintsy nanao fitsapana hafa.
Manahy ny hiverina any an-trano ve ianao noho ny fianakavianao?
Tao an-trano niaraka tamin'ny reniko sy ny rahalahiko izay voan'ny virus ihany koa aho. Tsy nihidy tao amin'ny efitranonay izahay satria efa nisedra zavatra ratsy intelo. Tsy nisy tokony hampanahy. Nikarakara ny tenanay ihany izahay mandra-pahatongan'ny fitsapana fahefatra.
Voalazanao fa raharaham-pianakaviana ny hotely. Tsy maintsy misy tolotra ara-toekarena mifandraika amin'ny fanakatonana azy…
Azo antoka. Manana traikefa hafa izahay satria trano fandraisam-bahiny hafa no nakatona nefa tsy maintsy nivoha izahay, izany hoe mihazakazaka ny rano, mampiasa herinaratra, mila manafatra entana avy amin'ny mpamatsy, sns… Noho izany, nisy ny vola lany tamin'izany. Ary koa, nahazo alalana hiverina tany amin'ny hotely aho satria tsy maintsy mandoa ny karaman'ny mpiasako.
Tsy maintsy mandoa ny mpiasanao ianao na dia tsy miasa aza ny hotely?
Eny. Manana fianakaviana izy ireo; mila fanampiana izy ireo. Ka ny nataoko dia ny manome ny antsasaky ny karamany amin'ny volana martsa ary hampandroso ny ambiny amin'ny volana aprily.
Manana fahatsapana ve ianao amin'ny fotoana mety hanombohan'ny sehatry ny fizahan-tany hiverina?
Hiverina amin'ny laoniny ny raharaha amin'ny farany. Hahomby izany ary angamba ho tsara kokoa noho ny teo aloha. Saingy mila fotoana be dia be isika vao tafarina ao Betlehema. Heveriko fa mila herintaona eo ho eo isika mandra-piarina amin'ny tongotrao indray. [Ny krizy ara-pahasalamana] dia tsy mifandraika amin'ity faritra ity fotsiny - fa ny seranam-piaramanidina rehetra manerantany. Ny tsirairay koa dia nisy fiantraikany ara-toekarena koa. Ka tsy hanana vola hivezivezy ny olona na dia manomboka misokatra miadana aza ny raharaha. Tsy ho mora izany. Saingy aorian'izany rehetra izany dia heveriko fa manana ho avy tsara isika.
Ary farany, misy teny fampaherezana azo ampitaina amin'ny olona?
Nahafinaritra ny traikefa tao amin'ny Angel Hotel satria nijanona teto izahay sy ny mpiasako ary izahay mianakavy. Nanana vondrona WhatsApp izahay ary nifampiresaka tontolo andro. Raha misy mila zavatra - fanampiana, sakafo, zavatra avy amin'ny fianakaviany - dia azony atao izany. Nisy olona niasa ho anay aty ivelany ary nataonay nahatsapa ireo vahiny ho toy ny hoe ao an-trano sy tsy manana ahiahy izy ireo. Tena nilaina ny nijanona ho tsara.
Source: Ny tsipika Media Mpanoratra: FELICE FRIEDSON SY CHARLES BYBELEZER
Ny talen'ny MPI teo aloha dia nahatakatra ny hoavin'ny indostria MICE